TOP-NEWS: Maamulka rugta ganacsiga iyo warshahadaha oo dhaliil culus loo jeediyey. | gobolada.com
Mar 18, 2019 - jawaab
Qaar ka mid ah Ganacsatada Gobolka Banaadir ayaa dhaliil xoogan u jeediyey Maamulka Rugta ganacsiga iyo warshadaha Soomaaliya.
Ganacsatadan oo qaarkood aan la xirriiray ayaa ii xaqiijiyay in khilaaf iyo hogaan xumo ka dhex jirto isla markaana arintaas cabasho uga gudbin doonaan dowlada federaalka gaar ahaan wasaarada ganacsiga.
“Khilaafka waxa uu salka ku hayaa kadib markii aan aragnay waxqabad la’aanta hogaanka rugta ganacsiga gaar ahaan Gudoomiyaha”ayuu yiri mid ka mid ah ganacsatada oo magaciisa ka gaabsaday in aan xigano.
Sidoo kale waxa uu sheegay in markii cabashadooda u gudbiyeen Gudoomiyaha uu jawaab uga dhigay in albaabada ka xirto isla markaana uu qabto shirar lagu kala jabinayo ganacsatada.
“Inaga oo og qaabka uu markii hore doorashada ugu guuleystay ayuu hadane hogaan xumo ku darsaday, arrintaasna cabashada aan ka gudbinay waxaa jawaab ka sugaynaa dowlada federaalka”ayuu hadalkiisa sii raaciyay.
Ganacsatadan aan la xiriirnay ayaa sidoo kale sheegay in gudoomiyaha rugta ganacsiga iyaga oo ka sugaya waxqabad, uu taa badalkeeda ku mashuulay arimihiisa gaarka ah, gaar ahaan ganacsiyada uu sheerka kula jiro iyo waliba dhulal uu si sharci dara ah uga qaatay dad danyar ah oo ku nool duleedka magaalada Muqdisho gaar ahaan agagaarka isbitaalka Keysaney ee waqooyiga magaalada Muqdisho ee Caasimada dalka Soomaaliya.
Si kastaba, Gudoomiyaha rugta ganacsiga ayaa ah shaqsi aad u jecel xilka isaga oo ku guul dareystay mar xilkaas isku soo sharaxay xiligii dowladii Allaha u naxariistee madaxweyne Abdullahi Yusuf Axmed taas oo kaga guuleystay ganacsade Iimaan xiligaa wixii ka dambeeyay waxa uu aad ugu mashquulsanaa sida uu xilkaas ugu guuleysan lahaa taas oo keentay kala qeybin uu ku sameeyay ganacstada, taasi oo u fududeysay in xilkaas muda dheer kadib dib u helay.
Ugu danbeyntii lama oga khilaafkaan ka dhex jira ganacsatada gobolka Banaadir sida ay xal uga gaari doonto dowlada federaalka Soomaaliya, gaar ahaan Wasaarada Ganacsiga maadaama dowlada aad ugu tiirsan tahay canshuurta ka soo xaroota Magaalada Muqdisho, taasoo inta badan ay bixiyaan ganacsatada gobolka Banaadir.